Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka UK » 90% bambooyinkii gaaska ee UK ayaa engegay gadashada argagaxa awgeed
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kirada baabuurka • News • Dadka • Waajib ah • Shopping • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK
Shidaal yaraanta ayaa lala xiriiriyay darawallada Gawaarida Alaabta culus (HGV) oo gabaabsi ah maadaama maxkamaduhu ay ku dhibtoonayaan inay keenaan keenista waqtigii loogu talagalay.
Xubnaha PRA waxay soo sheegeen gabaabsi baahsan oo u dhexeeya 50-90% bambooyinkii oo qalalay meelaha qaarkood.
Dowladda UK ayaa meesha ka saartay wax kasta oo ku saabsan shidaal yari waxayna sheegtay in dadka reer Britain ay tahay inay iibsadaan shidaalka sidii caadiga ahayd.
Xoghayaha deegaanka George Eustice ayaa sheegay in dowladdu aysan u yeeri doonin ciidanka inay shidaal gaarsiiyaan goobaha shidaalka ee engegan ee dalka oo dhan.
Ururka tafaariiqleyda batroolka (PRA), oo matalaya tafaariiqleyaasha shidaalka Ingiriiska ee madaxbannaan oo hadda ah 65% dhammaan garsoorayaasha UK, ayaa sheegay in xubnahoodu ay soo sheegeen gaas -yari baahsan oo baahsan, ka dib markii Ingiriisku ku soo degay maxkamadihii hore xitaa sida ay dawladdu ballanqaaday inaysan jirin wax laga walwalo ku saabsan.
Sida laga soo xigtay PRA, qaybo ka mid ah UK, inta u dhaxaysa 50-90% bambooyinkii ayaa qallalaya.
"Nasiib darro waxaan ku aragnaa argagax iibsi argagax leh meelo badan oo dalka ah," Gordon Balmer, oo ah agaasimaha fulinta ee ururka tafaariiqleyda batroolka (PRA) ayaa sheegay Isniintii. Wuxuu ugu baaqay dadka inay ka waantoobaan waalida lagu iibsado shidaalka. "Waxaan u baahanahay xoogaa xasillooni ah ... haddii dadku shabakadda ka saaraan markaa waxay noqonaysaa wax sii sheegid is-fulinaysa," ayuu yidhi.
Faallooyinka Balmer ayaa imanaya maalmo uun ka dib markii ay dawladdu meesha ka saartay wax hadal ah oo ku saabsan yaraanta shidaalka waxayna sheegtay in dadka reer Britain ay tahay inay iibsadaan shidaalka sidii caadiga ahayd. Si kastaba ha ahaatee, hadalka dowladda ayaan dheg jalaq loo siin markii safro lagu sameeyay bannaanka kaalmaha shidaalka ee dalka oo dhan dhammaadka wiigga. Saldhigyo badan ayaa lagu qasbay inay xiraan iyadoo gaadiidleyda xiisaha badan ay saf ugu jiraan shidaal.
Isniintii, UK Xoghayaha deegaanka George Eustice ayaa sheegay in dowladdu aysan u yeeri doonin ciidanka inay shidaal gaarsiiyaan goobaha shidaalka ee engegan ee dalka oo dhan. Eustice ayaa yiri, laakiin waxaan raacnay tababarayaal ka tirsan Wasaaradda Difaaca in la diyaariyo si loo tirtiro dib -u -dhaca baabuurta alaabada culus (HGV) ee tijaabooyinka wadista.
Shidaal yaraanta ayaa lala xiriiriyay gabaabsi darawallada HGV maadaama maxkamaduhu ay ku dhibtooday inay keenaan dhalmada waqtigeeda. In kasta oo ay dawladdu isku dayayso in dadka Ingiriiska ah ay noqdaan darawalada HGV, Axaddii Westminster ayaa ku dhawaaqday in la kordhiyay qorshaha fiisaha gobolka. Hadda, 5,000 darawallada HGV waxay awoodi doonaan inay ka shaqeeyaan Boqortooyada Midowday muddo saddex bilood ah marka la gaaro Kirismaska, taasoo yaraynaysa cadaadiska silsiladda sahayda.